WARBAAHINTA BBC-DA IYO SKY OO DIIDAY TABARUCAADKA GAZA | Toggaherer's Weblog
MAXKAMADA GOBOLKA TOGDHEER OO DIL QISAAS AH KU RIDAY NIN GACAN KU DHIIGLE AH
WARBAAHINTA BBC-DA IYO SKY OO DIIDAY TABARUCAADKA GAZA
Warbaahinta BBC-da iyo SKY oo diiday in loo dawaro GAZA
Idaacada ugu magaca roon dalkan ingiriiska ee BBC-da ayaa ka dhaaratay in warkeeda lagu daro qaylo dhaan ama dawaro loogu talo galay in lagu tabaaleeyo dadka aafaddu kasoo gaadhay weerarkii Israel ku qaaday Gaza.
Idaacada-ha kale ee dalkan ingiriiska sida Channel Four iyo ITV-news ayaa iyagu ogolaaday in tabaruca loo dalbado dadka ay wax kasoo gaadheeh musiibadaa. Waxaa jira u qaadan waa iyo amakaag inay ku noqotay dad aa u badan oo dalkan ku nool. BBC-da ayaa qiratay in ka badan 10 000 toban kun oo cabasho inay soo gaadheen, taas oo ay barbar socoto in ka badan 50 xubnood oo golaha wakiilada ka mid ahinay inay ka qayb galaan cadaadiska la saaray BBC-du inay yaboohan sii dayso.
Idaacadan oo iyana uu kusoo biiray SKY –ga ayaa sheegay inay tani kasoo horjeedo dhexdhexaadnimada Idaacada oo ay ka dhigan tahay inay ka hiiliyeen dawlada Israel. Idaacada BBC-da oo lagu dhaleecayay inaanay dhibka dadka reer Falstiin haysata aanay usoo bandhigin waqtigii xasuuqu socday ayaa tani waxay tilmaamaysaa in hadana godob kale ka galayaan dadka muslimiinta ah guud ahaan.
Waxa intaas dheer in BBC-da maamulkeedu la xidhiidheen mudanayasha Yuhuuda ee dalkan. Afhayeenka jaaliyada yuhuuda oo ka hadlaya arinkana waxa uu ku nuuxnuuxsaday inaanu ka hadli Karin go’aanka ay idaacadu qaadatay , waxuuna yidhi haddii naloo keeno oo aanu aragno ayaanu odhan karnaa waa mid haboon ama waa mid dhan u xaglinaya. Dhinaca kale rugta xidhiidhka iyo baadhitaanka yuhuude ee Ingiriiska (the Britain Israel Communications & Research Centre) iyo Safaarada Yuhuudu ku leedahay dalka Ingiriisku ayaa labaduba ka aamusay inay ka hadlaan.
Gabagabadii waxay ku tahay waji gabax idaacadan BBC-da oo ixtiraam badan loo ahayay dhexdhexaadnimadeeduna u muuqato inay u janjeedho dhinac. Tan uu sumcad daro kale ku kordhinaysa haba ay usoo wariso wararka xiligi dagaalku ka socday oo saluug ka muuqday ayaa tani-na ay ugu kordhinaysaa sumcad darro hor leh.